को हुन् साम्राज्ञीलाई मायाको चिनो दिने युवती ? | Screennepal
को हुन् साम्राज्ञीलाई मायाको चिनो दिने युवती ?
२०७५, २४ भाद्र आईतवारscreennepalfeature, Movie0
पछिल्लो समय नेपाली कलाकारका पनि खाल–खालका फ्यान भेटिन थालेका छन् । हाल रिलिज भइरहेको फिल्म ‘रोज’का हिरो प्रदीप खड्कालाई देखेर केही दिनअघि गंगबूमा उनका युवती फ्यान बेहोस् भएका थिए भने युवाले नजिकबाट भेट्न नपाउँदा प्रहरीमाथि जाइलागेका थिए ।
यस्तै, अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहका फ्यान भने मायाको चिनो नै बोकेर आए । साम्राज्ञी यतिखेर आफ्नो पछिल्लो फिल्म ‘इन्टुमिन्टु लण्डनमा’को प्रचारमा छिन् । यो फिल्मको टिम अहिले मोफसलको प्रचारप्रसारमा केन्द्रित छ ।
यसैक्रममा शुक्रबार फिल्म टिमसँगै अभिनेत्री साम्राज्ञी पुर्वको व्यस्त सहर इटहरी पुगेकी थिइन् । जहाँ साम्राज्ञीको यस्ता फ्यान भेटिए । जसले साम्राज्ञी र टिमका लागि उपहार नै बोकेर आएकी थिइन् ।
इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा साम्राज्ञी पत्रकारसँग सात्क्षार गर्दा गर्दै उनकी फ्यान मायाको चिनोसहित झुलिक्यन् । साम्राज्ञीको डाइहार्ट फ्यान हुन् पेस्को मेकअप स्टुडियोकी सञ्चालिका मनिता तामाङ । उनले साम्राज्ञीलाइ अंकमाल गर्दै खुसीको आँशु झारिन् । त्यसपछि फिल्मका टिमलाई खादा ओढाउँदै उनले साम्राज्ञीलाई मायाको चिनो दिइन् ।
छायांकनदेखि नै चर्चामा रहको फिल्म ‘इण्टुमिण्टु लण्डनमा’ आउँदो ५ असोजमा देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदै छ । फिल्मकी मुख्य नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, नायक धिरज मगर, निर्देशक रेनाशा बान्तवा राईका अलावा गायक÷गायिका अहिले प्रचारमा जुटेका छन् । यो फिल्म रेनाशाको डेब्यु निर्देशन हो । उनले फिल्मको अधिकांश छायांकन लण्डनमै गरिएको बताउँदै भनिन्, ‘इन्टुमिन्टु लण्डनमा दर्शकले मन पराउने कुरामा विस्वस्त छु ।’
Previous Postकेशुको गाउँमा फूल्यो ‘बुकी फूल’ (फोटो फिचरसहित) Next Postमरिष्काको निर्देशनमा त्यो सपना... (भिडियो)